Sidee si ay u baadhaan oo heli songs jecel on YouTube
Sida loo Goobidda iyo Raadi jecel Songs on YouTube
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu kalsoon yahay oo laga cabsado, si loo hubiyo in heesaha oo aan kaliya ka helay on YouTube, laakiin waxaa sidoo kale ku daray in ay liiska ugu jeceshahay . Si loo hubiyo in ugu fiican ee la siiyo user ee arrintan la xiriira YouTube had iyo jeer in la hubiyo in qaababka aan la casriyeeyay oo keliya, laakiin sidoo kale la hormartay marka la eego technology sida ay hubineysaa in user ka hesho natiijooyinka ugu fiican. Siyaabaha ugu sareysa si ay u baadhaan, oo aad u hesho ciyaaro heeso jecel yahay si loo hubiyo in compatibilities kala duwan search engine waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira. The search engine ugu soo booqday adduunyo ee dhaw waa Google halkaas oo ku dhawaad ​​1 milyan oo baaritaan lagu sameeyo saacadiiba taas oo ah tiro aad u badan si tutorial tani ku saleynayaan ku functionalities ee Google sida ay sidoo kale leeyahay YouTube si mawduuca noqdo fudud. Ka dib waa top 8 siyaabaha ay u baadhaan oo heli songs jecel on YouTube:
3. ugu YouTube baadhay
4. Iyadoo playlists
5. Top qiimeeyo heeso iyo videos
7. Top qiimeeyo music
8. videos music Popular
Google waa search engine ee ugu weyn dunida oo sabab la mid ah waxaa loo isticmaali doonaa in la hubiyo in tutorial uu noqdo mid fudud oo is ku tiirsan. Si aad u hesho ugu wanaagsan ee reer fikradda user ay u baahan tahay in la furo Google search engine ie https://www.google.com/?gws_rd=ssl
User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in magaca heesta la baaray ku xiga YouTube tusaale ahaan Rap Ilaah YouTube:
Sida ugu dhakhsaha badan natiijada ku soo kor user ku riixi kartaa mid ka mid ah kuwa si loo hubiyo in song ee ciyaaray on YouTube ah.
User wuxuu u baahan yahay in la furo YouTube si loo hubiyo in hannaanka bilaabo:
Bar raadinta waxaa markaas waa in la adeegsadaa si aad u hesho natiijooyinka raadinta la doonayo:
The song la xiriira ka dibna waxaa la ciyaari karaan iyaga oo aan arin kasta:
Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fudud si ay u hubiyaan in songs YouTube waxaa la baadhay iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. User xaq u baahan yahay in ay soo booqdaan https://www.youtube.com/ oo ku qoran bogga ugu weyn ee uu leeyahay in la raadiyo Macmiil-ka:
Channel ayaa song user waxaa heshiiska in la soo bandhigi doonaa bogga soo socda, taas oo mar kale user ayaa si guji si aad u hubiso in hogaanka ku qoran iyo heesaha inta badan u arkaan ayaa loo arkaa sare ee bogga. Waa arrin default ah oo uu soo dalbaday by YouTube iyo sabab la mid ah user natiijada ugu wanaagsan aan arrinta wax ka heli kartaa.
User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan https://www.youtube.com/ si bogga ugu weyn ee u muuqataa,
Jidka in markaas waa in la raaco waa Playlists> videos jeclaa,
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in madaxdii gabayga oo la jecel yahay ama video ah oo uu soo jeclaa ee la soo dhaafay aan la soo ciyaaray oo kaliya laakiin sidoo kale ku riyaaqay. Isticmaalka habkan waxaa aad u sahlan in la hubiyo in videos waxaa lagu ciyaaray oo ku riyaaqay oo aan ka kaaftoomi kasta oo user ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay si loo hubiyo in si dheeraad ah iyo in ka badan videos waxaa lagu daray hab raacan adeegsato si playlist u jeclaa si baadi marnaba weli ah ka dibna dheecaanka regard this
User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan https://www.youtube.com/videos si loo hubiyo in sare loo qiimeeyo ee videos waxaa lagu soo bandhigaa iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in liiskan gudahood waxaa jira oo dhan heeso iyo walax kale oo user a doonayo in uu dhagaysan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ayaa sidoo kale ka raadin kartaa content baar raadinta in uu yahay dusha sare ee bogga ee. Bar raadinta waxa kale oo hubin doona in user helo gabayadii la xidhiidha this page keliya oo aan in YouTube oo dhan.
User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan bogga ie https://www.youtube.com/channel/UCF0pVplsI8R5kcAqgtoRqoA si loo hubiyo in interface in ay haboon tahay in URL ka muuqda sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
User ayaa markaas u baahan yahay in guji tab playlists on sare ee bogga si ay u sii wadi arrintan la xiriira:
Liisaskani sare dhexdooda waxaa jira oo dhan iyo music videos la xiriira oo user a ka fikiri karaa. Helitaanka ka dibna in la hubiyo in ay heeso sare waxaa lagu ciyaaray ma aha kulan ah user ee dhammaan hadda sidii geeddi-socodka waa mid aad u fudud oo toos ah.
User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan https://www.youtube.com/channel/UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ si aad u hubiso in bogga soo socda u muuqataa kaaftoomi badan ku lahayn,
User ayaa haatan waxa uu leeyahay si loo hubiyo in ay isha ku jira ee sare ee bogga waxaa navigated. Tani waxaa ka mid ah guriga, videos, playlists, channels oo ku saabsan. Waxaa oo dhan oo ku saabsan muusiga iyo user wuxuu iyaga ka qaadi ugu fiican ee ka soo baxay waxaa ka mid ah iyada oo aan ka kaaftoomi kartaa wax. Link waxaa sidoo kale si joogta ah u updated ay ku dhiirigelinayaan in uu iyada oo aan wax ka kaaftoomi iyo arrinta iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ma ka heli kartaa meel kasta oo kale oo ku saabsan dhan YouTube taas oo ka wanaagsan marka la barbar dhigo page in uu halkan ku xusan.
User waxa uu leeyahay in ay soo booqdaan https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgquLnL59alCl_2TQvOiD5Vgm1hCaGSI si bogga soo socda u muuqataa la khariidad in lagu Xusay in shaashada in la soo dhejiyo hoos ku qoran:
User ayaa xaqiijin kara in music video ay khusayso waxaa markaas soo ciyaaray oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in this page ayaa lagu hayo horumarinta YouTube sidaa daraadeed waxa si joogta ah waxaa lagu casriyeeyaa iyo user wuxuu heli karaa natiijada ugu wanaagsan marka this page ayaa booqday.
The ku qoran yihiin ugu sareeya 8 siyaabaha user a qaataan karaa si loo hubiyo in music caanka ah ayaa la baadhay on YouTube ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in siyaabaha Waxaa halkan ku xusan waa kuwa kuwaas oo si toos ah ee la xiriira goobta laftiisa iyo sabab la mid ah, kuwaas oo siyaabo mid ka mid ah habka ugu wanaagsan oo ugu horumarsan ah ee lagu hubiyo siiyaan in video of music ah la baaray. Hababka in lagu soo sheegnay ee Casharrada hore ayaa sidoo kale lagu dabakhi karaa si loo hubiyo in music jecel waxaa si toos ah soo bixi YouTube.
Fiiro gaar ah: Download music internet bilaash ah leh TunesGo
Bedelka aad Music u dhaxaysa Qalabka (macruufka / Android)
> Resource > Video > Sida loo Goobidda iyo Raadi Songs jecel on YouTube